China NBR Latina fanamboarana sy orinasa | FIZA
Carboxylated butyronitrile Latex ho an'ny fanitrihana dia andiana vokatra vita amin'ny ronono plastika mba hanomezana fahafaham-po ny filàna isan-karazany amin'ny fivoaran'ny latèka, ao anatin'izany ny fonon-tànana vita amin'ny fonon-tratra ary ny lateks. Ny andiam-bokatra latina misy menaka, mitafy, mahatohitra, tanjaka avo lenta ary manitatra ny toetra mampiavaka azy. Ny teknolojia famokarana latsa fanodinana fahatelo dia nahatratra ny famokarana indostrialy, hampidina ny tombony amin'ny vidiny sy ny kalitao tsara hanoloana ireo vokatra nafarana. Satria ny singa latina toy izany ao amin'ny rojo dia nampiditra hetsika ho an'ny vondrona, noho izany dia misy solika, fanoherana solvent, nefa koa misy solifara, valin'ny fifangaroan'ny oksida vy, fa mora ihany koa ny maka sary, Tuomo, sy ireo toetra hafa.
Ny latex Carboxyl NBR dia karazana emulsion fanaparitahana polymer avo polymerized an'ny butadiene, ary Acrylonitrile amin'ny alàlan'ny teknika mandroso. Amin'ny maha emulsion matevina fotsy azy, io dia iray amin'ireo akora malaza amin'ny indostrian'ny fanenon-tànana, ampiasaina amin'ny famokarana fonon-tànana fiarovana sy fonon-tanana.
zavatra vondrona Bika Aman 'endrika
Bika Aman 'endrika Fotsy ronono
Votoatiny matevina % 42-46%
Sanda PH Min 8,0
Fahamafisana mekanika % Max 0,1
Amponga plastika 200kg, 1000kg IBC, Tanjona miovaova 20000kg.
Ny fitaterana sy ny fivarotana eo anelanelan'ny maripanan'ny 0-40 ℃, miaro amin'ny hatsiaka sy ny fiakarana mivantana amin'ny tara-pahazavana, mihidy ny kaontenera rehefa tsy ampiasaina; Fiainan'ny talantalana 6 volon'ny daty famokarana ao anatin'ny toe-javatra fitehirizana tsara.
Nbr Latex Rano fotsy
Vidiny Nbr Latex